Bit By Bit - Mifehy - Activities
ambaratongam-sarotra: mora , antonony , mafy , tena sarotra
mitaky matematika ( )
mitaky Coding ( )
fanangonana antontan'isa ( )
ny favoris ( )
[ ] Ny mifamaly foana manohitra ny areti-mifindra-pihetseham-po fanandramana, Kleinsman and Buckley (2015) nanoratra hoe:
"Na dia marina fa ny mety ho fanandramana ny Facebook dia ambany, na dia, tamin'ny hindsight, ny vokatra dia tsaraina ho ilaina, misy toro lalana iray manan-danja ao amin'ny tsatòka eto izay tsy maintsy nanohana. Toy izany koa fa ny mangalatra dia mangalatra vola na inona na inona no tafiditra, noho izany dia manana zo rehetra tsy ho Nanandrana eo raha tsy ny fahalalantsika sy ny fanekena, na inona na inona ny toetry ny fikarohana. "
Iza amin'izy roa lahy rafitra etika resahina ao amin'ity toko ity-consequentialism na deontology-dia tena mazava tsara izany hevitra mifandray amin'ny?
Ankehitriny, sary an-tsaina fa te hilaza ny amin'ity toerana. Ahoana no miady hevitra ny raharaha ny mpanao gazety ao amin'ny The New York Times?
Ahoana, raha amin'ny rehetra, dia ny fandresen-dahatra ho hafa raha ianao no miresaka izany amin'ny mpiara-miasa?
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) dia mihevitra ny fanontaniana ny mpikaroka raha tokony hampiasa ireo bitsika izay efa voafafa. Vakio ny taratasy mba hianatra momba ny fototra.
Fakafakao io fanapahan-kevitra avy amin'ny deontological fomba fijery.
Fakafakao ny tena fanapahan-kevitra izany avy amin'ny fomba fijery consequentialist.
Iza no mahita mandresy lahatra kokoa amin'ity tranga ity?
[ ] Ao amin'ny lahatsoratra teo an-tsaha ny etikan'ny ny andrana, Humphreys (2015) , nanolo-kevitra manaraka ity fanandramana kidaladalan'ny mba hanasongadinana ny etika olana ny fitsaboana izay atao tsy fanekena ny fiantraikany rehetra antoko sy izay manimba ny sasany, ary manampy ny hafa.
"Lazao ny mpikaroka no nifandray amin'ny napetraka ny fiaraha-monina fikambanana izay te-hahalala raha mametraka jiro an-dalambe ao amin'ny fokontany mahantra no hampihena ny heloka bevava mahery setra. Ao amin'io fikarohana ny foto-kevitra dia ny mpanao heloka bevava: mitady nilaza fanekena ny olon-dratsy dia azo inoana fa nampandefitra ny fikarohana ary azo inoana fa tsy ho tsy mivoaka anyhow (fandikana ny fanajana ny olona); ny olon-dratsy dia azo inoana fa hitondra ny vola lany amin'ny fikarohana tsy misy soa (fanitsakitsahana ny rariny); ary hisy tsy fifanarahana momba ny soa azo avy amin'ny fikarohana - raha mahomby, ny mpanao heloka bevava indrindra dia tsy hanombana azy (mamokatra ny olana ho an'ny fanombanana ny fiantrana olona). . . . Ny olana manokana eto dia tsy ny foto-kevitra fotsiny na izany aza manodidina. Ireto misy ihany koa ny loza izay hahazoany ny tsy-foto-kevitra, raha ohatra mpanao heloka bevava hamaly faty manohitra ny fikambanana mametraka ny jiro ao an-toerana. Ny fikambanana dia mety ho tena mahalala ny loza ireo, fa ho vonona ny hitondra azy ireo, satria izy ireo Diso hevitra ilay vehivavy nino ny ratsy-nanorina zavatra andrasana avy amin'ny mpikaroka avy amin'ny oniversite mpanankarena izay tena antony amin'ny anjara mba hamoahana. "
Manorata mailaka ho an'ny fiaraha-monina ny etika fanatitra fikambanana fanombanana ny fanandramana araka ny namorona? Ve ianao hanampy azy ireo hanao ny fanandramana araka ny tolo-kevitra? Inona avy no mety hisy fiantraikany ny fanapahan-kevitra?
Misy fiovana ny sasany izay mety hanatsarana ny fanombanana ny etikan'ny ity nanaovana fanandramana.
[ ] Tamin'ny taona 1970 60 ny olona nandray anjara tamin'ny andrana an-tsaha izay nisy tany amin'ny lehilahy ny efitra fandroana tao amin'ny oniversite any amin'ny afovoany andrefan'i ampahany amin'ny US (ny mpikaroka tsy anarana ny anjerimanontolo) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Ny mpikaroka dia liana amin'ny fomba ny olona mamaly ny fanitsakitsahana ny manokana toerana, izay Sommer (1969) voafaritra ho toy ny "faritra tsy hita maso sisin-tany manodidina ny olona iray ny vatana ho izay intruders dia mety tsy ho tonga." Kokoa manokana, ny mpikaroka nifidy ny hianatra fomba iray ny urination olona dia fiantraikany noho ny fisian'ny olon-kafa teo akaiky teo. Rehefa avy nitarika ny fandinihana fotsiny ny fianarana, ny mpikaroka fanandramana nitarika an-tsaha. Mpandray anjara noterena mba hampiasa ny ankavia-urinal indrindra amin'ny telo urinal efitra fandroana (ny mpikaroka tsy manazava ny fomba tena nitranga izany). Manaraka, ireo mpandray anjara dia notendrena ho iray amin'ireo sokajy telo eo amin'ny fifandraisana amin'ny lavitra. Ho an'ny sasany ny olona ny mpihavana Nampiasa urinal zo akaikiny azy, fa ny olona sasany ny mpihavana Nampiasa urinal toerana iray hiala ao aminy, ary ho an'ny olona sasany tsy mpihavana niditra tao amin'ny efitra fandroana. Ny mpikaroka norefesiny ny vokatra hiovaova-hataka andro ny fotoana sy ny fikirizana-amin'ny alalan'ny Mijoro ny mpikaroka mpanampy tao amin'ny fihinanam-bilona kabine mifanakaiky amin'ny mpandray anjara ny urinal. Toy izao ny fomba ny mpikaroka namariparitra ny fomba fandrefesana:
"Ny mpandinika dia nijanona tao amin'ny fihinanam-bilona avy hatrany kabone mifanakaiky amin'ny foto-kevitra 'urinal. Nandritra ny mpanamory fitsapana ireo dingana nazava fa fitadiavana fomba hampandraisana amin'ny sofina dia tsy azo ampiasaina ho famantarana ny fanombohana sy ny fampitsaharana ny [urination]. . . . Kosa, sary fitadiavana fomba hampandraisana nampiasaina. Ny mpandinika Nampiasa periscopic Prism alentika ao niisa ny boky eo amin'ny tany ny kabine am. Ny 11-mirefy (28-cm) toerana eo amin'ny tany sy ny manda ny kabine fihinanam-bilona nanome ny fomba fijery, ny alalan 'ny periscope, avy amin'ny mpampiasa ny ambany ny vatan'ilay lehilahy ary nanao izay azo atao mivantana sary nahitana ny fandehan'ny fisotrony. Ny mpanara-maso, na izany aza, tsy afaka mahita ny foto-kevitra ny tavany. Nanomboka ny mpandinika fijanonana roa famantaranandro rehefa misy foto-kevitra vao mainka ho amin'ny urinal, nitsahatra iray rehefa nanomboka urination, ka nisakana ny hafa rehefa urination dia faranana. "
Hitan'ny mpikaroka fa nihena ny elanelana ara-batana ny fitomboan'ny Mitarika hataka andro ny nanombohan'ny ary nihena fikirizana (Sary 6.7).
Mihevitra ve ianao fa ny mpandray anjara nisy maty na naratra ny andrana izany?
Heverinao ve fa ny mpikaroka tokony ho nitarika andrana izany?
Inona no fiovana, raha misy, no fahazoan-dalana mba hanatsarana ny etika mandanjalanja?
Sary 6.7: Vokatra avy amin'ny Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Lehilahy izay niditra tao amin'ny efitra fandroana dia notendrena ho iray amin'ireo telo fepetra: akaiky lavitra (ny mpihavana napetraka tao amin'ny mifanila avy hatrany urinal), antonony lavitra (ny mpihavana napetraka urinal iray nesorina), na tsy nampiasa ny urinal mpihavana. Mpanara-maso iray nametraka ao an-kabone fihinanam-bilona nampiasa fomba amam-panao-nanao periscope hitandrina sy fotoana ny hataka andro sy fikirizana ny urination. Standard diso manodidina ny vinavina dia tsy misy.
[ ] Tamin'ny volana Aogositra 2006, tokony ho 10 andro mialoha ny fifidianana ny Kilonga, 20.000 mponina tao Michigan nahazo mailaka izay nampiseho ny fifidianana fitondran-tena sy ny fitondran-tena ny fifidianana ny mpiara-monina (Sary 6.8). (Hitantsika tao amin'ny toko, any Etazonia,-panjakana ny governemanta foana firaketana ny izay bato isaky ny fifidianana sy io vaovao io dia natao ho an'ny daholobe.) Izany indrindra fitsaboana namoaka ny lehibe indrindra vokatry efa nahita ka izany teboka iray monja sombin mailaka: dia nitombo ny taham-pahavitrihana 8.1 isan-jato ny tahan'ny amin'ny teboka (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Hametraka izany eo amin'ny manodidina, miray tapakila matetika miteraka mitombo ny tokony ho iray isan-jato hevitra (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Ny vokany dia tena lehibe fa miasa ara-politika atao hoe Hal Malchow nanolotra Donald Green $ 100.000 tsy mba hamoaka ny vokatry ny andrana (inoana mba Malchow afaka mampiasa izany vaovao tenany) (Issenberg 2012, p 304) . Nefa, Alan Gerber, Donald Green, sy Christopher Larimer no namoaka ny taratasy tamin'ny taona 2008 tao amin'ny American Political Science Review.
Rehefa nandinika tsara ny mpandefa hafatra ao Sary 6.8 mba jereo fa ny mpikaroka anaran'ireo tsy hita izany. Kosa, ny miverina adiresy dia ny Fomba politika Consulting. Ao amin'ny fahalalana ny taratasy manazava ny mpanoratra: "Fisaorana manokana ho any Mark Grebner ny Fomba politika Consulting, izay namorona sy mitantana ny namany Sary fandaharana nianatra eto."
Mba hijery ny fampiasana ny fitsaboana ity raha resaka fitsipika etika amin'ny efatra voalaza ao amin'ity toko ity.
Inona no fiovana, raha misy, no manoro ny andrana izany?
Soraty ny etika fanazavana fanampiny izay mety hiseho izany taratasy izany rehefa navoaka.
Sary 6.8: Mahaliana mpandefa hafatra avy Gerber, Green, and Larimer (2008) . Zavatra tsy mpandefa hafatra taham-pahavitrihana nitombo 8.1 isan-jato ny tahan'ny amin'ny hevitra, ny lehibe indrindra mandrakizay vokany izay efa nandinika ho tokana-tapa mpandefa hafatra.
[ ] Fanorenana amin'ny fanontaniana teo aloha, indray mandeha mailers 20,000 ireo no nalefa (Sary 6.8), ary koa ny 60.000 hafa mety tsy dia mora mailers, nisy valifaty avy amin'ny mpandray anjara. Raha ny marina, Issenberg (2012) (p 198) dia mitatitra fa "Grebner [ny talen'ny Fomba politika Consulting] dia tsy afaka ny kajy firy ​​ny olona nitondra ny olana mba hitaraina amin'ny alalan'ny telefaonina, satria ny biraony namaly milina feno haingana dia haingana ny vaovao mpiantso tsy afaka ny handao ny hafatra. "raha ny marina, Grebner nanamarika fa ny valifaty mety ho lehibe kokoa aza raha efa Nananika ny fitsaboana. Ary hoy izy Alan Gerber, iray amin'ireo mpikaroka, "Alan raha efa nandritra ny dimy hetsy dolara ka rakotra azy ny fanjakana rehetra izaho sy ianao dia ho miaina miaraka Salman Rushdie." (Issenberg 2012, p 200)
Ve izany vaovao manova ny valin 'ny fanontaniana teo aloha?
Inona no paikady fa rehefa mifandray amin'ny fanaovana fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka no manoro ny hoavy fianarana izay mitovy?
[ ] Amin'ny fomba fanao, indrindra etika adihevitra mitranga mikasika ny fampianarana izay mpikaroka tsy manana nilaza marina fanekena avy amin'ny mpandray anjara (ohatra, ny telo fanadihadiana tranga ao amin'ity toko ity). Na izany aza, dia afaka ihany koa ny adihevitra etika hisy ny fanadihadiana izay manana fahalalana ampy manaiky marina. Mamorona kidaladalan'ny fianarana izay hanana ny tena fahalalana ampy fanekena avy amin'ny mpandray anjara, fa izay mbola mihevitra ho unethical. (Soso-kevitra: Raha manana olana ianao, dia afaka miezaka mamaky Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)
[ ] Ny mpikaroka Matetika no miady mafy mba hilazana ny etika fomba fisainany ny tsirairay sy ny besinimaro. Rehefa izany dia nahita fa Andramo, karavato ary fotoana indray-fantatra, Jason Kauffman, ny mpitarika ny fikarohana ekipa, nanao fanehoan-kevitra ampahibemaso vitsivitsy mikasika ny fitsipi-pitondrantena ao amin'ny tetikasa. Vakio ny Zimmer (2010) ary avy eo dia mamerina manoratra ny fanehoan-kevitra Kauffman mampiasa ny fitsipika sy ny etika rafitra izay voalaza ao amin'ity toko ity.
[ ] Banksy dia iray amin'ireo mpanakanto malaza indrindra ankehitriny ao amin'ny United Kingdom, ary Izy no mahafantatra ny politika mitodika eny an-dalana ny graffiti (Sary 6.9). Ny maha-marina tsara, na izany aza, dia zava-miafina. Banksy manana vohikala manokana mba hahafahany hanao ny maha-bahoaka, raha tiany, fa izy no nisafidy ny tsy. Tamin'ny 2008 ny Daily Mail, ny gazety, dia namoaka lahatsoratra iray milaza hamantatra Banksy ny tena anarany. Avy eo, tamin'ny 2016, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo sy Steven C. Le Comber (2016) niezaka ny manamarina izany filazana mampiasa dingana Dirichlet nafangaro modely ny toerana profiling. More manokana, dia nanangona ny ara-jeografia toerana Banksy ny bahoaka ny graffiti ao Bristol sy Londres. Avy eo, amin'ny alalan'ny fikarohana amin'ny alalan'ny lahatsoratra sy gazety taloha fifidianana bahoaka firaketana an-tsoratra, sy ny mpiara-miasa Hauge nahita lasa adiresy ny atao hoe olona, ​​ny vadiny, sy ny lalao baolina kitra (izany hoe, baolina) ekipa. Ny mpanoratra ny famintinana ny fitadiavana ny taratasy toy izao manaraka izao:
"Tsy misy hafa lehibe 'ahiahiana' [sic] ny fanadihadiana, dia sarotra ny manao kevitra fanambarana momba ny Banksy ny maha mifototra amin'ny fanadihadiana aseho eto, afa-tsy hoe: ny tampon 'ny geoprofiles roa Bristol sy London ahitana ny adiresy fantatra ho mifandray amin'ny [anarana redacted]. "
Taorian'ny Metcalf and Crawford (2016) , dia efa nanapa-kevitra ny tsy hampiditra ny anaran 'ny olona, ​​rehefa miresaka momba izany fianarana.
Hijery izany fianarana mampiasa ireo fitsipika sy ny etika rafitra ao amin'ity toko ity.
Ve ianao nanao izany fianarana?
Ny mpanoratra hanamarinana izany fianarana ao amin'ny saro-takarina ny taratasy miaraka amin'ny manaraka fehezan-teny: "kokoa ankapobeny, ireo vokatra manohana ny teo aloha soso-kevitra fa ny fandalinana ny kely fampihorohoroana-mifandray amin'ny asa (ohatra, ny graffiti) azo ampiasaina mba hanampiana toerana fampihorohoroana faladiany eo anatrehan'ny lehibe kokoa loza mitranga, ary manome ohatra mahaliana ny amin'ny fampiharana ny modely ho sarotra, tena-olana izao tontolo izao. "Moa ve izany manova ny hevitry ny taratasy? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Ny mpanoratra dia ahitana izao manaraka izao fanamarihana etika amin'ny faran'ny ny taratasy: "Ny mpanoratra dia mahafantatra ny, sy ny fanajana ny, ny fiainana manokana ny [anarana redacted] sy ny havany ary dia toy izany ihany no nampiasa antontan-kevitra any amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Efa ninia nesorina adiresy mazava. "Ve izany manova ny hevitry ny taratasy? Raha eny, amin'ny fomba ahoana? Mihevitra ve ianao fa ny vahoaka / tsy miankina Fisampan-droa dikany amin'ity raharaha ity?
Sary 6.9: Street moa avy Banksy in Cheltenham, Angletera. Sary avy amin'i Robert Brian Marshall. Source: Wikimedia Commons .
[ ] Ao amin'ny lahatsoratra mahaliana Metcalf (2016) mahatonga ny tohan-kevitra fa "ampahibemaso misy datasets angon-drakitra misy tsy miankina no eo amin'ny mahaliana indrindra ny mpikaroka sy mampidi-doza indrindra ny foto-kevitra."
Inona ireo ohatra mivaingana roa manohana azy io filazana?
Ao amin'ity lahatsoratra ity ihany koa Metcalf milaza fa dia diso andro ny mihevitra fa "misy vaovao ratsy dia efa nisy zavatra nataony izay ampahibemaso dataset". Manomeza ohatra iray ny toerana mety ho izany ny raharaha.
[ ] Ao amin'ity toko ity no nanolo-kevitra ny fitsipi-ankihibe fa angon-drakitra rehetra dia mety fantatra sy tahirin-kevitra rehetra dia mety saro-pady. 6.5 latabatra dia manome ny lisitry ny ohatra ny tahirin-kevitra izay tsy misy mazava ho azy fa vaovao famantarana manokana fa izay mbola azo mifandray amin'ny olona voafaritra tsara.
Haka ohatra roa ireto ary farito ny fomba ny de-anonymization fanafihana amin'ny toe-javatra roa manana rafitra toy izany koa.
Fa isaky ny roa ohatra ny ampahany (a), farito ny fomba mety manambara ny angon-drakitra vaovao saro-pady momba ny olona ao amin'ny dataset.
Ary naka ny fahatelo dataset niala teo amin'ny latabatra. Manorata mailaka ny olona mihevitra fanafahana izany. Hazavao azy ireo ny fomba angon-drakitra izany mety ho fantatra ary mety mety saro-pady.
Table 6.5: Lisitry ny ohatra ny tahirin-kevitra ara-tsosialy izay tsy misy famantarana miharihary manokana vaovao, fa izay mbola azo mifandray amin'ny olona voafaritra tsara.
Fiantohana ara-pahasalamana firaketana an-tsoratra Sweeney (2002)
Carte de crédit barotra antontan-kevitra Montjoye et al. (2015)
Netflix sarimihetsika Rating antontan-kevitra Narayanan and Shmatikov (2008)
Antso an-tariby Meta-tahirin-kevitra Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
Search vatan-kazo tahirin-kevitra Barbaro and Zeller Jr (2006)
Mponina ankapobeny, panjakana, sy ny ara-tsosialy angon-drakitra momba ny mpianatra Zimmer (2010)
[ ] Mametraka ny tenanao eo amin'ny olona rehetra ny kiraro dia ahitana ny mpandray anjara sy ny ankapobeny, fa tsy ny namanao. Io fanavahana dia aseho ao ny raharaha ny Jiosy Chronic aretina Hopitaly (Katz, Capron, and Glass 1972, Ch. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .
Dr. Chester M. Southam dia niavaka dokotera sy mpikaroka ao amin'ny Sloan-Kettering Institute for Cancer Research sy ny mpampianatra momba ny Fitsaboana ao amin'ny Cornell University Medical College. Tamin'ny 16 Jolay, 1963, Southam sy mpiara-miasa aminy roa nampidirany homamiadana sela velona ho any amin'ny vatany ny 22 debilitated marary tao amin'ny Jiosy Chronic aretina Hopitaly any New York. Ireo tsindrona dia anisan'ny Southam ny fikarohana mba hahatakatra ny hery fanefitra ny miteraka kansera marary. Ao amin'ny fikarohana teo aloha, Southam nahita fa salama mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mandà nampidirany homamiadana sela ao amin'ny teny mafy 4 ka hatramin'ny 6 herinandro, Satria nandray marary, izay efa voan'ny kansera nanana ela kokoa. Southam nanontany tena raha ny tara noraisin'ny ao amin'ny homamiadana marary dia satria nanana voan'ny kansera na noho izy ireo efa be taona sy debilitated. Mba hiresahana amin mety izany, nanapa-kevitra ny mampiditra Southam kansera sela velona ho vondron'olona izay zokiolona sy debilitated, fa izay tsy manana homamiadana. Rehefa ny fianarana teny niely, Niteraka amin'ny ampahany noho ny fametraham-pialan'ny telo dokotera izay nangataka ny handray anjara, ny sasany nanao fampitahana amin'ny toby fitanana nazia fanandramana, fa ny hafa-monina any ampahany amin'ny fanomezan-toky avy Southam-hita ny fikarohana unproblematic. Tamin'ny farany, ny New York State Biraon'ny Regents nandinika ny raharaha mba hanapa-kevitra raha Southam dia tokony ho afaka hanohy ny mpanao fanafody. Southam niady hevitra teo ny fiarovan-tenany fa dia manao zavatra "tsara indrindra fomban-drazana ny andraikitra pitsaboana fanao." Southam ny fiarovana dia mifototra amin'ny maro ny fitarainana, izay rehetra tohanan'ny maro miavaka manam-pahaizana, izay nanambara niaraka tamin'izay hanao: (1) ny fikarohana dia ny avo ara-tsiansa sy ara-tsosialy mendrika; (2) tsy nisy appreciable loza amin'ny mpandray anjara; ny fitarainana monina ao anatin'ny Southam ny 10 taona mialoha traikefa maherin'ny 600 foto-kevitra; (3) ny haavon'ny fampiharihariana tokony ahitsy araka ny tahan'ny mety nametraka ny mpikaroka; (4) ny fikarohana dia mifanaraka amin'ny fari-pitsaboana fanao tamin'izany andro izany. Amin'ny farany, ny birao ny Regent nahita Southam meloka ny hosoka, fitaka, fitondran-tena sy ny matihanina, ary mihantona ny fahazoan-dalana ara-pahasalamana nandritra ny herintaona. Na izany aza, vao taona vitsivitsy tatỳ aoriana, Chester M. Southam voafidy filohan'ny Fikambanana Amerikanina ny Cancer ny mpikaroka.
Southam hanombana ny fianarana mampiasa ireo fitsipika efatra ao amin'ity toko ity.
Toa fa Southam naka ny fomba fijery ny mpiara-miasa aminy sy ny marina mialoha ny fomba mety hamaliana ny asany; Raha ny marina, maro tamin'izy ireo no nijoro ho vavolombelona tamin'izay hanao. Nefa, dia tsy afaka na tsy vonona ny hahatakatra ny fomba ny fikarohana mety ho manahiran-tsaina ny vahoaka. Inona no anjara asan'ny araka ny hevitrao ny hevitry-izay mety ho miavaka amin'ny hevitry ny mpandray anjara-tokony amin'ny fikarohana ny fitsipi-pitondrantena? Inona no tokony hitranga raha hevitry ny olona sy mpiara maha samy hafa ny heviny?
[ ] Ao amin'ny taratasy mitondra ny lohateny hoe "Crowdseeding any atsinanan'i Congo: Mampiasa Finday mba Angony Fifandirana Events Data in Real Time", Van der Windt sy Humphreys (2016) milaza ny nizara fanangonana antontan'isa rafitra (jereo ny Chapter 5) fa namorona tany Eastern Congo. Hoatran'ny ahoana ny mpikaroka nanao ny tsy fahazoana antoka momba ny mety hanimba ny mpandray anjara.
[ ] Tamin'ny Oktobra 2014, telo ny mpahay siansa ara-politika naniraka mailers ny mpifidy voasoratra anarana 102,780 in Montana ho isan'ny fanandramana mba handrefesana na mpifidy izay nomena fanazavana fanampiny dia azo inoana kokoa hifidy. Ny mailers-izay misy soratra hoe 2014 Montana General Information Fifidianana mpifidy Guide-nametraka Montana Fitsarana Tampony Fitsarana kandidà, izay ny tsy mitanila amin'ny fifidianana, eo ambonin'ny mizana avy amin'ny liberaly ny drazana, anisan'izany Barack Obama sy Mitt Romney toy ny fampitahana. Ny mpandefa hafatra ihany koa ny nahitana ny fandikana ny Lehibe Seal de l'Etat de Montana (Sary 6.10).
Ny mailers Niteraka fitarainana avy any Montana mpifidy, ka nahatonga Linda McCulloch, Montana ny Sekreteram-panjakana, mba hametraka fitarainana ofisialy amin'ny fanjakana Montana governemanta. Ny anjerimanontolo izay nampiasa ny mpikaroka-Dartmouth sy Stanford-nandefa taratasy ho an'ny olona rehetra izay efa nandray ny mpandefa hafatra fialan-tsiny na inona na inona mety ho fikorontanana sy ny fanaovana mazava fa ny mpandefa hafatra "dia tsy mpikamban 'na antoko politika, ny kandidà, na fikambanana, ary tsy natao vokany misy hazakazaka. "ny taratasy ihany koa dia nanazava fa ny fandaharana" niankina tamin'i-baovao mikasika izay fanomezana tsirairay avy ny fampielezan-kevitra. "(Sary 6.11)
Tamin'ny May 2015, ny misahana ny politika fanaon'ny ny Fanjakan'i Montana, Jonathan Motl, tapa-kevitra fa ny mpikaroka nandika Montana lalàna: "Ny Kaomisera no mamaritra fa misy ampy zava-misy mba hampisehoana fa Stanford, Dartmouth sy / na ny mpikaroka nandika Montana fanentanana fomba fanao lalàna mitaky fisoratana anarana, tatitra sy ny fampiharihariana ny fandaniam-bola tsy miankina. "(Ampy Mahita Faha-3 in Motl (2015) ). Nanoro hevitra ny misahana ihany koa fa ny County Attorney fanadihadiana na ny fampiasana tsy nahazoan-dalana ny fampiasana ny Lehibe Seal ny Montana Montana-panjakana mandika lalàna (Motl 2015) .
Stanford sy Dartmouth tsy miombon-kevitra amin'ny Motl ny didy. A Stanford mpitondra tenin'ny atao hoe Lisa Lapin hoe "Stanford ... tsy mino na fifidianana lalàna no nandika" ary ny mailaka "tsy ahitana na fisoloana vava manohana na manohitra izay kandidà." Izy nanamarika fa ny mpandefa hafatra mazava nilaza fa "dia nonpartisan sy tsy manohana kandidà na antoko misy. " (Richman 2015)
Hijery izany fianarana mampiasa ny efatra fitsipika sy roa rafitra voalaza ao amin'ity toko ity.
Mieritreritra fa ny mailers nalefa ho any amin'ny kisendrasendra santionana ny mpifidy (fa bebe kokoa mikasika izany indray mipi-maso), eo ambanin'ny toe-javatra inona no mety io mailaka efa nanova ny vokatry ny Fitsarana Tampony Justice fifidianana?
Raha ny marina, ny mailers dia tsy nirahina ho any amin'ny kisendrasendra santionan'ny ny mpifidy. Araka ny tatitra avy Jeremy Johnson (ny mpahay siansa ara-politika, izay nanampy tao amin'ny fanadihadiana), mailers "nalefa tany 64.265 mpifidy fantatra ho mety malala-tsaina ny olon'ny elatra afovoany mirona amin'ny Demokratika mirona sy 39.515 ora ireo mpifidy fantatra ho mpandala ny mahazatra ny olon'ny elatra afovoany ao Repoblikana mirona sy ora ireo. Ny mpikaroka nanamarinana ny tsy fitoviana eo amin'ny demokratika sy Repoblikana isa ny antony fa izy ireo mialoha taham-pahavitrihana ho be mpifidy ambany eo demokratika. "Ve izany manova ny fanombanana ny fikarohana nanaovana? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Ho valin'ny amin'ny fanadihadiana, ny mpikaroka nilaza fa naka io fifidianana amin'ny ampahany, satria "tsy ara-pitsarana efa akaiky hazakazaka nanohitra tao amin'ny Kilonga. Mifototra amin'ny fanadihadiana ny 2014 Kilonga voka-pifidianana ao amin'ny teny manodidina ny teo aloha Montana pitsarana fifidianana, ny mpikaroka tapa-kevitra fa ny fikarohana fianarana araka ny natao tsy hanova ny vokatry ny na fifaninanana. " (Motl 2015) ve izany manova ny fanombanana ny fikarohana ? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Raha ny marina, ny fifidianana nivadika ho tsy tena akaiky (Table 6.6). Ve izany manova ny fanombanana ny fikarohana? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Raha ny fandehany fa ny fianarana dia nanaiky ny Dartmouth IRB amin'ny iray amin'ireo mpikaroka, fa samy hafa betsaka avy amin'ny fianarana tena Montana. Ny mpandefa hafatra ampiasaina any Montana dia tsy nanaiky ny IRB. Ny fianarana dia tsy atolotra ny Stanford IRB. Ve izany manova ny fanombanana ny fikarohana? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Ihany koa ny fandehany fa toy izany koa ny mpikaroka dia naniraka fifidianana fitaovana ho 143.000 mpifidy ao Kalifornia sy New Hampshire 66.000 any. Raha ny fantatro, tsy nisy fitarainana ofisialy mahatonga ireny 200,000 eo ho eo fanampiny mailers. Ve izany manova ny fanombanana ny fikarohana? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
Inona, raha na inona na inona, no ho nataonao, raha ianao hafa no tena naman'ny Fiangonana? Inona no efa natao ny fianarana raha toa ka liana amin'ny trandrahana na fanazavana fanampiny dia mampitombo mpifidy taham-pahavitrihana amin'ny nonpartisan foko?
Table 6.6: Vokatra avy amin'ny Fitsarana Tampony Montana 2014 Justice fifidianana. Source: pejy web de Montana Sekreteram-panjakana .
Fitsarana Tampony Justice # 1
David W. Herbert 65.404 21,59%
Fitsarana Tampony Justice # 2
Mike Vary 195.303 59,06%
Figure 6.10: mpandefa hafatra nalefan'ny telo mpahay siansa ara-politika ny mpifidy voasoratra anarana 102.780 in Montana ho isan'ny fanandramana mba handrefesana na mpifidy izay nomena fanazavana fanampiny dia azo inoana kokoa hifidy. Ny santionany habe amin'ny fanandramana ity dia mitovitovy 15% ny afaka mpifidy ao amin'ny fanjakana.
Figure 6,11: fialan-tsiny taratasy izay nalefa tany amin'ny 102.780 mpifidy voasoratra anarana any Montana, izay efa nandray ny mpandefa hafatra any Sary 6.10. Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny Présidents de Dartmouth sy Stanford, ny anjerimanontolo izay nampiasa ny mpikaroka izay naniraka ny mpandefa hafatra.
[ ] Tamin'ny May 8, 2016, roa mpikaroka-Emil Kirkegaard sy Julius Bjerrekaer-norakofako vaovao avy ao amin'ny aterineto mampiaraka toerana OkCupid sy ampahibemaso Namoaka dataset ny tokony ho ny 70.000 mpampiasa, anisan'izany ny hiovaova ny anaram-pikambana, taona, lahy na vavy, toerana, fivavahana-mifandray hevitra, fanandroana-mifandray hevitra, mampiaraka mahaliana, isan'ny sary, etc., ary koa ny valiny nomena ny ambony 2600 fanontaniana eo amin'ny toerana. Ao amin'ny volavolan-taratasy navoaka niaraka tamin'ny antontan-kevitra, ny mpanoratra dia nilaza fa "Mety hisy manohitra ny etika sy hanafaka ny fanangonana antontan-kevitra ity. Na izany aza, ny angon-drakitra rehetra hita tao an-dataset dia na nisy ampahibemaso efa misy, ka hanafaka ity fotsiny dataset atolony azy ao an-mahasoa kokoa ny endrika. "
Ho setrin'ny famoahana ny angon-drakitra, iray amin'ireo mpanoratra dia nanontany tao amin'ny Twitter: "ity angon-drakitra napetraka dia tena indray fantatra. Na dia ahitana usernames? Nisy ny asa rehetra atao mba anonymize izany? ". Ny valinteny dia "No. Data dia efa-bahoaka. " (Zimmer 2016; Resnick 2016)
Hijery izany fanafahana angona mampiasa ny fitsipika sy ny etika rafitra resahina ao amin'ity toko ity.
Ve mampiasa tahirin-kevitra ity ho an'ny fikarohana manokana?
Ahoana raha ianao ary norakofako izany ny tenanao?
[ ] Tamin'ny 2010 ny fitsikilovana mpandalina amin'ny US Tafika nanome 250.000 tsiambaratelo diplomatika telegrama ho amin'ny fikambanana WikiLeaks, ary izy ireo taty aoriana navoaka aterineto. Gill and Spirling (2015) milaza fa "ny WikiLeaks fampiharihariana mety mampiseho ny tsarobidy ny tahirin-kevitra izay mety-hohainoana amin'ny hizaha toetra kolaka teoria amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ", ary avy eo dia ny antontan'isa mampiavaka ny santionany ny antontan-taratasy tafaporitsaka. , Ohatra, ny mpanoratra Tombanan'ny fa misolo tena ny 5% ny rehetra telegrama diplomatika nandritra izany fe-potoana, fa ohatry ity Miovaova arakaraka ny ambasady ny masoivoho (jereo ny Sary 1 ny taratasy).
Vakio ny taratasy, ary avy eo dia soraty ny etika fanazavana fanampiny ho azy.
Ny mpanoratra dia tsy mandinika ny afa-po ny zanaky ny tahirin-kevitra tafaporitsaka. Misy tetikasa mampiasa ireo telegrama izay mety hitarika? Misy tetikasa mampiasa ireo telegrama izay tsy fitondran-tena?
[ ] Mba hianatra ny fomba hamaliana ny fitarainana orinasa, mpikaroka sandoka nandefa taratasy fitarainana 240 avo-farany indrindra any New York City. Inty misy sombiny avy amin'ny taratasy noforonina.
"Izaho manoratra ity taratasy ity ho anareo aho, satria tezitra momba ny zavatra niainako vao haingana teo aho ny hotely fisakafoana. Tsy ela akory izay, izaho sy ny vadiko dia nankalaza ny tsingerintaona voalohany. ... Ny hariva lasa ninamana intsony ny soritr'aretina rehefa nanomboka hiseho tokony ho efatra ora rehefa avy nihinana. Extended maloiloy, mandoa, aretim-pivalanana, ary ny kibo kibo rehetra nanondro zavatra iray: sakafo fanapoizinana. Izany no mahatonga ahy mihevitra fa tezitra fotsiny ny tantaram-pitiavana manokana hariva Lasa nihena ho vadiko mijery ahy hamolaka ny amin'ny foetus tiled toerana teo amin'ny tany ny efitra fandroana tao anelanelan'ny fihodinana ny manipy ny. ... Na dia tsy ny fikasany hametraka misy tatitra amin'ny Better Business Bureau na ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana, tiako ianao, [anaran'ny restaurateur], mba hahatakatra ny zavatra nandeha namaky amin'ny mialoha fa ho hamaly mifanaraka amin'izany. "
Handinika izany fianarana mampiasa ireo fitsipika sy ny etika rafitra voalaza ao amin'ity toko ity. Noho ny fanombanana, no hanao ny fianarana?
Toy izao ny fomba ny trano fisakafoanana izay nandray ny taratasy naneho hevitra: "Tena culinary korontana toy ny tompony, ny mpitantana sy ny chefs nitady amin'ny alalan'ny ordinatera ho an'ny [anarana redacted] famandrihan-toerana na ny carte de crédit firaketana an-tsoratra, nandinika karazan-tsakafo ary mamokatra fiterahana ho mety rava sakafo, ka nanontany an-dakozia mpiasa mikasika ny azo atao fahadisoan'ny, mandrisika ny zavatra rehetra, na ny oniversite sy ny mpampianatra ankehitriny dia ny raharaham-barotra concede sekoly fianarana avy amin'ny helo. " (Kifner 2001) ve ity vaovao ity hanova ny fomba hanombana ny fianarana?
Raha ny fantatro, fianarana ity dia tsy nandinika iray IRB na zavatra hafa-antoko fahatelo. Ve izany fiovana fomba hanombana ny fianarana? Nahoana na nahoana no tsy?
[ ] Fanorenana izany fanontaniana teo aloha, te anao ny mampitaha io fianarana ho iray tanteraka fianarana hafa izay tafiditra ihany koa ny toeram-pisakafoanana. Ao amin'io fianarana hafa, Neumark sy mpiara-miasa (1996) naniraka roa lahy sy roa vavy mpianatra amin'ny oniversite amin'ny noforonina mba hampihatra nitohy ny asa toy ny mpanome sakafo sy ny mpandroso sakafo amin'ny 65 tsara indrindra any Philadelphia, mba hanadihady firaisana ara-nofo ny fanavakavahana amin'ny toeram-pisakafoanana handraisana mpiasa. Ny 130 fampiharana nitondra ny 54 tafa sy dinika sy 39 tolotra asa. Ny fianarana manan-danja ny antontan'isa hita porofo ny firaisana ara-nofo ny fanavakavahana ny vehivavy eo amin'ny vidiny avo-trano fisakafoanana.
Soraty ny etika fanazavana fanampiny ho an'ny fianarana.
Ve ny hevitrao fianarana izany dia pahamendrehana tsy mitovy amin'ilay voalaza ao amin'ny fanontaniana teo aloha. Raha eny, amin'ny fomba ahoana?
[ ] Ny sasany indray mitoraka 2010, 6.548 profesora ao amin'ny United States nahazo mailaka mitovy amin'ny anankiray.
"Ry Profesora Salganik,
Manoratra aminareo aho, satria izaho dia tendrena ho Ph.D. mpianatra aminy no liana amin'ny fikarohana. Ny drafitra dia ny mihatra amin'ny Ph.D. fandaharana ho avy izany latsaka, ary izaho te hianatra ho betsaka araka izay azo atao momba ny fikarohana fahafahana Mandritra izany fotoana izany.
Ho amin'ny fonenan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao, ary na dia fantatro dia fohy filazana aho, dia nanontany tena raha toa ka mety manana 10 minitra rehefa ho vonona ny hihaona amiko mba fohy miresaka momba ny asa sy izay mety ho fahafahana ho ahy mba hahazo anjara amin'ny ny fikarohana. Isaky izay mety ho mety aminao mety ho tsara amiko, tahaka ny fihaonana aminareo no laharam-pahamehana voalohany nandritra io fitsidihana fonenan'ny mpianatra.
Misaotra anao mialoha mba hodinihinareo.
Amin-kitsimpo, Carlos Lopez "
Ireo mailaka dia anisan'ny saha fanandramana mba handrefesana na mpampianatra no kokoa ny mamaly ny mailaka miankina amin'ny 1) ny fotoana-filanjana (ankehitriny vs herinandro) ary 2) ny anaran'ny mpandefa izay samy hafa ny famantarana ny foko sy ny lahy sy ny vavy (oh, Meredith Roberts, Raj Singh, sns). Hitan'ny mpikaroka fa rehefa izay irin'ny ireo mba hihaona amin'ny 1 herinandro, Caucasian lehilahy no nahazo fahafahana ho mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana momba ny 25% matetika kokoa noho ireo vehivavy sy ny vitsy an'isa. Fa, rehefa noforonina ireo mpianatra nangataka fivoriana amin'izany andro izany izy ireo dia indrindra lamina intsony (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .
Hijery izany fanandramana araka ny fitsipika sy ny rafitra ao amin'ity toko ity.
Rehefa ny fianarana no mpifehy, ny mpikaroka dia naniraka ny fiatrehana ny fahatairana manaraka mailaka rehetra mpandray anjara.
"Vao haingana, dia nahazo mailaka avy amin'ny mpianatra mangataka 10 minitra ny fotoana mba hiresahana ny Ph.D. fandaharana (ny vatana ny mailaka miseho etsy ambany). Izahay emailing anareo anio mba debrief anareo ny tena tanjona izany mailaka, toy ny tamin'ny anisan'ny fianarana fikarohana. Manantena izahay ny fianarana no hahatonga anao tsy misy fanelingelenana ary miala tsiny raha toa ka ianao mihitsy no inconvenienced. Ny fanantenana dia ny hoe ity taratasy ity dia ampy hanome ny fanazavana ny tanjona sy ny famolavolana ny fianarana mba hanamaivanana izay mety hanana ahiahy momba ny fandraisany anjara. Te-hisaotra anao noho ny fotoana sy ny mamaky bebe kokoa ianao raha liana amin'ny fahatakarana ny antony nandray ity hafatra ity. Manantena izahay fa hahita ny lanjan'ny ny fahalalana mialoha mamokatra isika amin'ny fianarana akademika lehibe ity. "
Rehefa avy nanazava ny antony sy ny famolavolana ny fianarana, izy ireo koa dia nanamarika fa:
"Raha vao ny vokatry ny fikarohana dia azo, dia mandefa azy ireo eo amin'ny tranonkala. Masìna ianao, antoka fa tsy fantatra mihitsy ho antontan-kevitra no tatitra avy amin'izany fianarana, ary ny eo amin'ny foto-kevitra nanaovana antoka fa isika ihany no ho afaka ny hamantatra ireo tompon'andraikitra mailaka ny Endriky ny aggregate - tsy ny olona ambaratonga. Tsy misy olona na ny anjerimanontolo dia ho fantatra na inona na inona avy amin'ny fikarohana na mamoaka angon-drakitra isika. Mazava ho azy, misy olona mailaka valinteny dia tsy manan-danja toy ny misy antony maro ny olona mety hanaiky mpikambana sampam-pianarana na handà ny fivoriana fangatahana. Tahirin-kevitra rehetra dia efa de-fantatra sy ny fantatra mailaka valinteny efa voafafa avy amin'ny angona sy mifandray lohamilina. Ankoatra izany, nandritra ny fotoana ny antontan-kevitra dia fantatra, dia voaro amin'ny matanjaka sy tsy manana ahiahy ny tenimiafina. Ary raha foana ny raharaha, rehefa manam-pahaizana momba ny fitondran-tena fikarohana olombelona foto-kevitra, ny fikarohana protocols dia nankatoavin'ny ny oniversite 'Institutional Review Boards (ny Columbia University Morningside IRB sy ny Anjerimanontolon'i Pennsylvania IRB).
Raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny zony toy ny fikarohana foto-kevitra, dia manorata any amin'ny Columbia University Morningside Institutional Review Board amin'ny 212-851-7040 na amin'ny alalan'ny mailaka amin'ny askirb@columbia.edu sy / na ny University of Pennsylvania Institutional Review Board amin'ny 215 -898-2614.
Misaotra anareo indray noho ny fotoana sy ny fahatakarana ny asa ataontsika. "
Inona avy ireo fanehoan-kevitra noho ny fiatrehana ny fahatairana amin'ity tranga ity? Inona avy ireo fanehoan-kevitra manohitra? Heverinao ve fa ny mpikaroka tokony debriefed ny mpandray anjara amin'ity tranga ity?
Ao ny manohana aterineto fitaovana, ny mpikaroka manana fizarana mitondra ny lohateny hoe "Human olom-pehezin'ny fiarovana." Vakio ity fizarana ity. Misy zavatra izay mety manampy na manala.
Inona no vidin'ny ity fanandramana ny mpikaroka? Inona no vidin'ny ity fanandramana ny mpandray anjara? Andrew Gelman (2010) dia nilaza fa mpandray anjara amin'ny fanadihadiana ity mety no onitra noho ny fotoana araka ny fanandramana no mpifehy. Manaiky izany ve ianao? Miezaha hanao ny fandresen-dahatra amin'ny fampiasana ny fitsipika sy ny etika rafitra ao amin'ny toko.